Google Earth တွင် KMZ/KML ဖိုင်တစ်ခုထည့်နည်း
KMZ/KML ဖိုင်ကို Google Earth တွင် ထည့်သွင်းနည်း
ဆော့ဖ်ဝဲလ် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းများအကြောင်း ပြောသည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲသိထားရမည့် အရာတစ်ခုမှာ အပလီကေးရှင်းများနှင့် အလုပ်လုပ်သော ဖိုင်ဖော်မတ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တူညီသော ထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ် တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်သော ဖိုင်အချို့ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်မတ် သို့မဟုတ် မဟုတ်ပါက ဖိုင်ကို တင်မည်မဟုတ်ပါ။
Google Earth ၏အခြေအနေတွင်၊ ပထဝီဝင်အချက်အလက်များအပြင် သင်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူမှပြုလုပ်ထားသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ထားနိုင်သည့်အခြားသောအရည်အချင်းများ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ဆော့ဖ်ဝဲမှအသုံးပြုသည့် ဖိုင်ဖော်မတ်မှာ KML/KMZ ဖြစ်သည်။ Google Earth သည် KML/KMZ ဖိုင်များပုံစံဖြင့် Google Earth အတွက် အပ်ဒိတ်ဖိုင်များကို အကြိမ်များစွာ ထုတ်လွှတ်သည်၊ ၎င်းသည် သင့်အက်ပ်လီကေးရှင်း၏တည်ဆောက်မှုတွင် အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ဒေတာအသစ်ဖြင့် patch လုပ်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာ ပုံမှန် KML/KMZ ဖိုင်တစ်ခုအတွင်းပါရှိသော ဖိုင်များဖြစ်သည်-
နေရာအမှတ်အသားများ၊ လိုင်းများ/လမ်းကြောင်းများ၊ နှင့် polygons
အသံမပါဘဲ ရိုးရှင်းသော KML ခရီးစဉ်များ
သင့်တွင် KML/KMZ ဖိုင်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်းကို သင်၏ Google Earth တည်ဆောက်မှုတွင် မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကို တွေးတောနေပါက၊ ဤသင်ခန်းစာသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် မသဲကွဲဘဲ၊ ဒါကို ဘယ်လို ပြီးမြောက်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
1 အဆင့်။ Google Earth အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။ ဤသင်ခန်းစာအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘရောက်ဆာဗားရှင်းကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သဖြင့် လိုက်လုပ်နိုင်ရန် သင် အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
2 အဆင့်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ 'စာကြောင်းသုံးကြောင်း' အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။
3 အဆင့်။ ပေါ်လာသော မီနူးမှ 'ပရောဂျက်များ' ရွေးစရာကို နှိပ်ပါ။
ဘတ် Android မှာတည်နေရာကိုဘယ်လိုဝေမျှမလဲ
4 အဆင့်။ ယခု သင့်တွင် KML/KMZ ဖိုင်ကို သင့် drive တွင်သိမ်းဆည်းထားပါက 'Drive မှဖွင့်ရန်' ရွေးချယ်မှုကို နှိပ်ပါ။
5 အဆင့်။ သင့် drive ရှိ ဖိုင်များကို ရှာဖွေပြီး လိုအပ်သောဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဖိုင်ကို ယခု Google Earth တွင် တင်ပါမည်။ ဒါလည်းလွယ်​တယ်​!!
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အချို့နေရာများအတွက် ပုံအသစ်များကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းအတွက် အပ်ဒိတ်တစ်ခုကို Google က ပေးလိုသည့်အခါတိုင်း၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တည်နေရာအသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးလိုသည့်အခါတိုင်း၊ သင်သိမ်းဆည်းထားရမည့် ဤ KML/KMZ ဖိုင်များပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ သင်၏ Drive ကို ချက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်စိတ်ကြိုက် အက်ပ်တွင် ဖာထေးပါ။
Google Earth အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုလိုပါက ၎င်းကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီ link.
လွန်ခဲ့သော Google Earth ပေါ်ရှိ နေရာတစ်ခု၏ အမည်နှင့် ဖော်ပြချက်ကို ပြောင်းလဲနည်း
နောက်တစ်ခု Google Earth မှာ သင့်အိမ်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။